Aragtida Dadweynaha Archives - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha
Qoraaga Max’med Suldaan Garyare ayaa tacliiqiyay shirkii fashilka kusoo idlaaday ee hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Garoowe. Kalimaddan ama hawraartan ayaa ahayd hawraar horey loo bixiyey ama fal ahaan u dhacday. Erey siyaasadeedkan (political term) ayaa lagu xaman jirey in ay go’aan iyo qorsheba u ahayd xukaamta ama madaxda dalalkan Carabta marka ay ...
Adigoo bu’weyntiyo ka qalan baal wadnaha kiiye, Bowdyihiyo dhabarkiyo adoo baf ka yiri qoorta, Bukaanada halka lagu daweyn laguna baaraayo, Haddii uu baxnaanada fadhiyo cadaw bir kuu haysta, Nin Ilaah bariiyoo ma oge laga badbaadshaaye, Barta godan intuu kaa gelshow booca jarayaaye, Qolo kaa la baabaan rabaa in aan bidhaan shaaye, Buunka reer galbeedkee codkiyo baaxada leh xoogan, Ee buuruhu ...
Ka hor inta aanu nuurka Islaamku ku faafin qabiilladii Carbeed ee Nabiga SCW lagasoo saaray waxay ahaayeen dad aad u hooseeya, ilbaxnimadooduna liidatay marka lala barbar dhigo boqortooyooyinkii Faaris iyo Ruum. Nus qarni kadib Dadkii raacay xaqa islamarkaasna qaatay Diinta Islaamka waxay furteen Faaris iyo Ruum waxayna noqdeen mid ka mid ah Dowladaha ugu tunka weyn ee Caalamka. Muslimiinta Soomaaliyeed ...
Damaca Badd-doonka Itoobiya Iyo Damanaanta Soomaalida. Qalinkii: Cali Cabdi Coomay
May ahayn wax lala yaabo codsigii ay Itoobiya hordhigtay madaxweynihii Faransiiska ee ahaa in loo tababaro ciidan badda iyo hadalkii dhawaan uu jeediyey taliye ku xigeenka ciidanka difaaca Itoobiya oo ahaa in dalka Itoobiya yahay wadan weyn islamarkaana leh ciidamada ugu xooga badan Afrika, sidaas darteedna Ra’isal wasaare Abiy waxaa uu keeney qorshe lagu dhiso ciidamada Badda dalkaan. ” Anagoo ...
Aljazeera Iyo Warbixintii “Dagaalka Dekadaha” Waydiimo Jawaab U Baahan!
Tan iyo kolkii la xayaysiiyay muuqaalka “Dagaalka dekedaha” oo qayb ka ahaa barnaamijka “Masaafat Sifr” oo Weriye Salaam Hundaawi ay u diyaariso Aljazeera, waxa aan ka mid ahaa kumannaan qof oo sugayay, xalay 10:05pm ayaanu barnaamijkaasi soo galay. Waan hubaa oo ilaa kolkii barnaamijkaasi uu soo baxay waxa aan arkayay asxaab badan oo mid kastaa uu dhiniciisa uga dareen celinayo. ...
Sida caadiga ah dadku way ku kala duwanyihiin fekerka iyo araa’da, Waxaana sabab looga dhigi karaa xogta ay helaan taasi oo go’aamineysa fahamkooda ku aaddan shey cayiman. Hadaba qormadaan waxaan kaga faloonayaa sameeynta ay xogtu ku leedahay fekerka, caqliga iyo xagasha aan wax aragno iyo sida uu cadawgu dadka ugu qanciyo mabadi’diisa ugu dambeyna u noqdaan dad diintoodi uga tanaasulay ...
“Berigii Hore Isku-joog baa Lagu Dhici jiree Maxaa Inagu Soo kordhay?” Jamaal Cali Xuseen
“Bilowgii ilaa imika: Saaka anigoo sawiro uun eegaya ayuun bay suudhka Igu qaaday. Sawirkii iyo suudhkii Ugu horeeyey ee aan gashado waxay ahayd anigoo 18 jir ah Oo aan Hargeysa ka toshay kolkaan dugsiga sare dhameeyey ee aan ciyaaraha ku jiray, waana sawirka Ugu horeeya. Suudhkii ku xigayna Muqdisho ayaan ka toshay. ilaa aan macallin Jaamacadeed noqday, ilaa aan hantidhowre ...
Tartankii loo galay xilka madaxtinnimada Soomaaliya 8 Feberaayo 2017 waxaa ku guuleystay Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo. Intii lagu jiray ololaha doorashada wuxuu sheegay in ay ka go’an tahay in uu dalka ka hirgeliyo isbeddel siyaasadeed, mid amni iyo mid maamul intaba. Khudbadii uu ka hor jeediyay golayaasha baarlamaanka oo socotay muddo nusu-saace ku dhaw, Madaxweyne Farmaajo wuxuu ballanqaaday in uu ...